Konke mayelana ne-Colour Pallete, i-Colour Swatch, Umbala Wopende, Umbala Wezinwele, kanye Umbala We-Makeup – Online Image Color Picker
Konke mayelana ne-Colour Pallete, i-Colour Swatch, Umbala Wopende, Umbala Wezinwele, kanye Umbala We-Makeup
Uma kukhulunywa ngombala, into yokuqala eza engqondweni yakho ingaba uhlu lwemibala oyaziyo. Zingaba bomvu, luhlaza okwesibhakabhaka, luhlaza okotshani, omnyama, omhlophe, onsomi onsomi, ompunga, opinki, onsomi, kanye nowetera. Manje, udinga ukwazi ukuthi kunemibala engaphezu kwezigidi eziyi-16.8.
Uyabona, imibala ayikwazi ukuhlukaniswa nempilo yomuntu. Ukungasho ukuthi, kufanele ujwayele iphalethi yombala. Noma mhlawumbe, kuzofanele futhi usebenzise isishintshi sombala noma umbala wokupenda ngobuciko bakho. Futhi, awunakugwema ukusebenzisa umbala wezinwele ezintsha noma umbala we-makeup ukuze ubukeke kahle. Uyabona, umbala uwuphawu lokuqonda komuntu okubonakalayo okuchazwe ngezigaba zemibala.
Uyini Umbala Palette?
Into yokuqala kuqala, udinga ukwazi ukuthi iphalethi yombala kungenye igama lesikimu sombala. Uyabona, ngombala mbala, isikimu sombala ukukhethwa kwemibala esetshenziselwa ukwakheka kobubanzi bemidiya. Ukungasho ukuthi, ukusetshenziswa kwe-achromatic kwesizinda esimhlophe esinombhalo omnyama. Kuyisibonelo sohlelo lombala oluyisisekelo noluzenzakalelayo ekwakhiweni kwewebhu. Okuningi ukusho, izikimu zemibala zisetshenziselwa ukudala isitayela nokukhanga.
Izisekelo Zombala Wombala kanye Namagama Asemibala
Ngabe umbala unjani, njengombala oluhlaza okwesibhakabhaka noma obomvu
Umbala umsulwa kangakanani; ukuntuleka kokumhlophe, okumnyama noma okumpunga okungezwe kukho
Amandla noma buthakathaka kombala
Umbala ukhanya noma umnyama kangakanani
Idalwe ngokungeza okumpunga ku-hue emsulwa
Idalwe ngokungeza okumnyama ku-hue emsulwa
Idalwe ngokungeza okumhlophe ku-hue
Athini imibala yephalethi ehlukile?
Ngemininingwane, kunezinhlobo ezine eziyinhloko zama-palette anemibala. Nakhu ke!
Yebo, kukhombisa izithunzi ezahlukene nokujula kwe-hue eyodwa. Uyabona, kungaba yizikimu zemibala elula ukwenza. Kungenxa yokuthi zonke zithathwe kumbala ofanayo. Kuliqiniso, kungaba nzima kepha akunakwenzeka ukwenza uhlelo olubi noma mhlawumbe olubi. Noma kunjalo, kufanele uqaphele. Leyo! Ama-palette e-Monochromatic angaba yisicefe uma kwenziwe kabi.
Okulandelayo, kukhombisa umbala ophambili nemibala evela nhlangothi zombili esondweni lemibala. Okuningi ukwazi, ama-palette ngokuvamile enza umsebenzi omuhle wokubonisa ukuvumelana. Ngasikhathi sinye, kusebenza futhi ukufana ngaphakathi komklamo. Impela, kulula ukusebenza nabo njengoba kungekho mehluko omkhulu ku-hue. Esikhundleni salokho, ungabona ukuthi umehluko uthinteka ngokuyinhloko ngokuhlukahluka komthunzi wombala. Futhi, kukhawulela noma yikuphi ukuphazamiseka kude nokuqukethwe.
Okulandelayo, kuyaphelelisana noma imibala ehlukile esondweni lemibala. Kufana nokubomvu nokuluhlaza okotshani, okuluhlaza okwesibhakabhaka no-orange, njalonjalo. Kuyiqiniso, ama-palette ahlanganayo alungile ngomqondo wokulinganisela. Ukungasho ukuthi, ungabheka ama-palette analogous. Lapha, ungangeza amathiphu ahlukahlukene kanye nezithunzi ezingakhulisa amacebo. Lokhu kuzosiza ekugwemeni umehluko okhazimulayo. Ngakho-ke, ungagwema ukudala i-eyestrain uma imibala emibili ephikisayo ibekwa eduze komunye nomunye.
Okokugcina, kukhombisa imibala emithathu evela kumaphoyinti we-equidistant esondweni lemibala. Banjengobomvu, ophuzi, nohlaza okwesibhakabhaka. Ungabona ukuthi indlela kanxantathu idala iphalethi elihluke kakhulu. Ngalesi sizathu, kudinga ukuhlela okuningana nokuhlolwa. Akungabazeki, kunjalo njengoba kubandakanya inombolo enkulu yama-hues aphikisanayo.
Uyazi ukuthi Kusho ukuthini Imibala?
Okuluhlaza okwesibhakabhaka: ukuzethemba, ukuthula, ubuhlakani
I-Orange: injabulo, intshiseko, ubuqambi
Okumnyama: ubuhle, amandla, imfihlakalo
Ubomvu: amandla, amandla, intshiseko
Okumhlophe: ubumsulwa, ukuhlanzeka, ukuphelela
Okuphuzi: ukuhlakanipha, injabulo, amandla
Okuhlaza: ukukhula, okusha, isifiso sokuphepha, ukuphepha
Inhloso: isifiso sokuvelela, ukunethezeka, ubuqambi
Ngiyithola kanjani iphalethi lami lombala?
Kufanele unqume izisekelo zakho. Ukunquma isikhathi sakho sombala, okokuqala udinga ukuthola ukuthi ngabe izici zakho zinama-undertones afudumele noma apholile.
Setha umehluko omkhulu noma umehluko ophansi
Inquma isikhathi sakho sombala
Bheka iphalethi lakho lombala!
Yini umbala weSwatch?
I-swatch iyisampula yezinto ezibonakalayo noma zombala. Isibonelo seswatch kuyinto encane yendwangu.
Imuphi Umdwebo Wopende okufanele Ngipende Igumbi Lami Lokuhlala?
Uyazi, kunemibala emi-5 ephezulu ongayifaka egumbini lakho lokuhlala. Nakhu ke!
Yebo, okuluhlaza ngombala wokuvumelana nokuvuselela.
Akungabazeki ukuthi, izindonga ezimpunga zenza ukuthi igumbi lakho lokuhlala lizizwe libanzi kakhudlwana.
Kuyiqiniso, uluhlaza okwesibhakabhaka umbala owuthandayo waseMelika, ngakho-ke, akukho-brainer yegumbi eletha wonke umuntu ndawonye.
Futhi, i-beige ingukuhamba kokungathathi hlangothi kwabaklami abangaphakathi.
Lona, umbala omnyama uyakwazi ukukhombisa ubuciko bekamelo lakho.
Manje, Ungathini Ngokusebenzisa Umbala Wezinwele Womuntu?
Lapha, udinga ukwazi ukuthi umbala wezinwele ngumbala wezikhumba zezinwele ezisuselwe ezinhlotsheni ezimbili ze-melanin. Owokuqala yi-eumelanin kanti owesibili yi-pheomelanin. Ngokuvamile, uma i-eumelanin ngaphezulu ikhona, uzothola umbala wezinwele mnyama. Futhi, uma i-eumelanin encane ikhona, uzothola i-h
Texture Styles Stucco Color Selection
What Hair Color Should I Get For …
Before After Straight And Wavy Curly Hair
Beige And White Combination Curtain For Living …